I-Apartment eZimeleyo kwi-Terminillo-Rialto
Le ndlu yamkelekile kakhulu, ibekwe kumgangatho ophantsi kwaye inomnyango ophambili ofumaneka kwindawo yokuhlala kunye nozimeleyo ngokusebenzisa i-terrace encinci. Lilonke lahlulwe laba yiholo yokungena, igumbi lokuhlambela elineshawari, igumbi lokulala elinewadilophu kunye nebhedi yebhedi kunye negumbi elikhulu neliqaqambileyo elinetafile eqinileyo yamaplanga, ibhedi yesofa ephindwe kabini kunye nekhabhathi yekhitshi. Ukufudumeza kuzimele.
Ilungele iintsapho okanye amaqela amancinci abahlobo.
Le ndlu inommandla omalunga ne-45 yeemitha zeskweri, ibekwe kwindawo yokuhlala yaseRialto, ngezantsi nje kwentaba yeNtaba iTerminilluccio, ngaphantsi kwe-1km ukusuka kwi-ski slopes, imizuzu emi-5 ukusuka kwi-ski lifts kunye ne-2km ukusuka eSebastiani. Phepha..
Ngaphakathi kwendawo yokuhlala kukho iinkonzo ezongezelelweyo ezifana nebar encinci kunye nenethiwekhi ye-Wifi.
Kuba yindlu ebekwe kumgama ukusuka kwindawo endisebenza kuyo kunye nendawo endihlala kuyo, ngelishwa andizukwazi ukuqinisekisa ubukho bam ngexesha lokuhlala ubusuku bonke. Nangona kunjalo, iya kuba ngumdla wam ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kukuthanda kwakho. Naliphi na icebiso liya kwamkeleka.
Kuba yindlu ebekwe kumgama ukusuka kwindawo endisebenza kuyo kunye nendawo endihlala kuyo, ngelishwa andizukwazi ukuqinisekisa ubukho bam ngexesha lokuhlala ubusuku bonke. Nangona…